Notsapainay ny LG Optimus 3D (II) | Androidsis
el_iulius | | LG, hevitra, Tutorials
Aorian'ny a ampahany voalohany izay vao niresaka momba ny lafiny ara-batana amin'ny terminal, ny fitaovana, ny fitaovana ary ny famaranana dia hiresaka ity faharoa ity amin'ny lafiny lozisialy. Inona no entiny sy izay azontsika atao ankafizina ao sy ny rafitra 3D manavao izay ampidiriny.
Voalohany, ny dikan-android. Amin'izao aloha dia tsy maintsy milamina ianao Android Froy 2.2.2. Toa ahy io fa iray amin'ireo teboka ratsy indrindra amin'ny terminal. Miaraka amin'ny herin'ny fitaovana rehetra ananany dia tokony havaozina hatrany amin'ny boaty mankany amin'ny Gingerbread izy io. Ny terminal izay an-tànako dia tsy mamela ahy hanavao. Milaza izany fa misy lesoka mpizara ary tsy manamarina akory izany raha misy fanavaozana. Ho an'i LG dia manantena aho fa ho terminal fotsiny izany.
Ny kinova an'ny LG Optimus launcher ny mamindra amin'ireo menus dia mitovy izay azontsika jerena ao amin'ny Optimus Black na Optimus 2X. Toa tsy fahombiazana izany amiko, satria tsotra be loatra io. Ny fampitahana an'ity terminal ity (ny laharana an-tampon'ny LG) amin'ireo faran'ny kaliberin'ny Galaxy S2, EVO 3D na Sensation, antenaina fa hampiasa bebe kokoa ny herin'ny sary fa tsy amin'ny lalao ihany. eFA sary mihetsika vitsivitsy, ary karazana widgets hisafidianana, miaraka amin'ny efa mahazatra an'ireo mpanamboatra famantaranandro-climatology rehetra. Amin'ny lafiny hafa amin'ny fahatsorana dia mila tsy misy tara miseho, ny terminal miadana tsy tsikaritra, ary afaka manana fampiharana "mavesatra" mihazakazaka manara-penitra isika raha tsy mandeha mandeha pedal ny telefaona.
Toy ny telefaona rehetra ankehitriny, dia misy fampiharana ho an'ny mailaka na tambajotra sosialy. Amin'ny tambajotra sosialy + dia afaka ampidirina ao anaty tambajotra sosialy sy ho fantatsika izay rehetra masaka ao amin'ny mombamomba anay 2.0. Izy io koa dia manana ny SmartShare afaka mizara atiny eo amin'ireo fitaovana marika LG mifanentana aminy. Izy io dia miaraka amin'ireo rindranasa mifandraika amin'ny toetrandro na ny vaovao namboarin'i LG. Malahelo ny rindrambaiko natao ho an'ny Twitter na Facebook ianao ary aza misintona ny ofisialy ho an'ny telefaona ity.
Mazava ho azy fa manana izay rehetra ilainao ianao mba hankafizanao ny fahaizan'ny multimedia ao amin'ny terminal. Audioplayer miaraka amina kalitao tena tsara izay hahafinaritra anao ny mozika tianao. Raha tsy manana mozika tianao ianao dia afaka foana mampiasa radio Mitondra anao hihaino ny onjan'ny FM ianao ary hahita ny gara tianao.
Eny, nitahiry ny tsara indrindra ho an'ny ampahany farany amin'ity lahatsoratra ity aho, ny 3D. Raha vantany vao manomboka ny terminal izahay dia manana fidirana mivantana amin'ilay Habaka 3D Terminus. Mpandefa launcher iray izay efa ao amin'ny 3D no manokatra ho antsika. Ilaina ny zatra ny maso amin'ny lafiny fahatelo, izay sarotra indraindray. Mihodina ianao ary mankafy ny fomba fijery 3D hisafidianana Fampiharana sy lalao 3D, torolàlana 3D, 3D YouTube, 3D Gallery na fakan-tsary 3D. Ny filazana izany, raha azoko atao, dia pasona mampihomehy. Raha manomboka kely ianao dia mahita Lahatsary Youtube amin'ny 3D, mamindra anao amin'ny fantsona 3D amin'ny tranokalan-dahatsary, ary afaka mankafy horonan-tsary momba ny biby ianao (tena amporisihiko izy ireo), ny velaran-tany, ny zotram-pifandraisana, ny dinidinika ... Avy eo mety te haka fotoana fohy ianao andramo amin'ny 3D ny fakantsary handraisana sary an-tsary na hakana sary fohy amin'ny fotoana tianao indrindra. Taty aoriana, raha mbola manana bateria ianao dia mety hilalao lalao 3D sasany amin'ireo tonga mialoha napetraka, Asphalt 6 3D na Mamela Golf 3D. Aorian'ny lafiny fahatelo be dia be, raha maharitra anao ny bateria, ary tsy manana fanina be loatra ianao, angamba afaka manohy mankafy azy io ianao.
Farany, miresaka indray momba ny bateria. Ara-bakiteny: "Misotro azy io". Fitaovana goavambe ho an'ny mAh kely asehony. Ho sarotra aminao ny ho tonga amin'ny faran'ny andro miaraka amin'ny bateria kely hahafahana mamaky ireo mailaka.
Andao avela ny fampisehoana sy izay azontsika atao mivoaka amin'ny terminal amin'ny ampahatelony. Hizaha lalao amin'ny 3D izahay mba hahitana ny fomba fiasan'ny telefaona ary raha afaka mankafy azy isika nefa tsy ho reraka.
Avelako horonantsary ho anao izay afaka mahita azy amin'ny 3D.
Ary eto ny kinova 3D
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Notsapainay ny LG Optimus 3D (II)
krakos dia hoy izy:
Rehefa maka fanahy ny 3D dia mihozongozona ny Galaxy S2, fa mitazona noho ny filana telo refy nofenoiko ny 3DS.
Na izany na tsy izany, be ny fanentanana amin'ny 3D ary tena tsy dia tratra izy ireo; Raha ny fahitako azy, ny zavatra tratra dia ny fomba fijery telo refy amin'ny halalinany, ary ny halaliny dia midika fa ny 3D dia voamarika avy amin'ny «efijery» ao anatiny, toy ny hoe nitombo ny haben'ny efijery (zavatra toa ny TARDIS an'ny Doctor Who xD). Mbola tsy nahita na inona na inona aho fa ny tena fahatsapana mivoaka amin'ny efijery. Mbola tena tsara, zavatra hafa noho ny mahazatra.
Ny lesoka servera rehefa mitady fanavaozana dia omen'ny lg3d rehetra, jereo ny htcmanía dia ho hitanao fa toy izany. Mahamenatra, satria miaraka amin'ny Gingerbread dia hahazo ranom-boankazo be ianao
Valiny tamin'i Krakos
Davicin_lb dia hoy izy:
Tsia. Toa mahafinaritra ahy izany, ny zava-misy fa ny halalin'ny halalin'ny 3d dia lainga fotsiny, miankina amin'ny hoe mahay manoratra ianao mba hivoahana amin'ny efijery, tsotra be izany, misy ny olona natokana amin'ny firaketana zavatra izay nivoaka avy teo amin'ny efijery, efa misy ianao tokony ho veterana kely an'ny 3d raha hijery azy tsara dia maka sary aho mba hahitanao ny fivoarany 3 4 cm mihoampampana araka ny nolazaiko sahady tao amin'ny menio 3d iray amin'ireo efa mivoaka 3d ny fampiharana ary aza mividy azy amin'ny 3d crappy an'ny 3ds azafady azafady fa manana koa aho, izany no antony ilazako azy hoe fahasalamana2.
Mamaly an'i Davicin_lb
Manana lg optimus 3d aho ary ny anadahiko galaxy s2 ary ny lg dia somary ambony hahaha izay mijery ny eske efatra dia tsy manana hevitra satria tsy tena izy io amin'ny internet fa haingana kokoa ny lg, ny efijery tiako lalao tsara lavitra kokoa ny kalitaon'ny feo dia be loatra ary ny fakan-tsary izay raha ratsy k noho ny an'ny galaxy 2 fa raha tsy izany dia tsara kokoa ny lg ny plastika ratsy samnsung dia fako lg dia tsara lavitra ary na dia tsy misy ny fanavaozana 2.3 noho ny hoe Mivoaha puffff izany dia hanararaotra betsaka noho ny vahindanitra …… Faly aho fa tsy misy olana amin'ny haingam-pandeha haingana sy lehibe ananan'ny rahalahiko tsy manadala ny ahy jhahaha
Saenz620 dia hoy izy:
Salama, tolak'andro tsara, tiako ho fantatra hoe aiza na aiza no ahitako ilay radio lg optimus 3d (lg-p920)
Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahita azy aho ary raha misy mahalala hoe aiza izany azafady dia tiako izany
Valio amin'i Saenz620
ManyS dia hoy izy:
Tsy misy an'ity telefaona ity ny radio fm. Scam ity nifanarahana ...
Valio amin'i ManyS
Salama aho manana lg optumus 3d ny zavatra mahagaga dia ny mampiavaka azy dia miresaka ny radio ho toy ny fampiharana fa raha ny tena izy dia tsy manana an'io rindranasa io ny olona mahalala pejy iray hisintomana azy